ktmkhabar.com - शुक्रबार, कुन भगवानको पुजा गर्ने ?
शुक्रबार, कुन भगवानको पुजा गर्ने ?
हिन्दु धर्मशास्त्र अनुसार प्रत्येक दिनको महत्व फरक छ । यही फरक महत्वलाई बुझ्न सके दैनिकी सहज बन्ने छ । आज शुक्रबार हिन्दू धर्मावलम्बीहरुले सन्तोषी माता र वैभवलक्ष्मीको पूजाआराधना गर्दछन् ।